जापानी फ्योस्शिकी (कपिल लपेटिङ) ओसाका | Experience Japan
› ब्लग Nepali › जापानी फ्योस्शिकी (कपिल लपेटिङ) ओसाका
जापानी फ्योस्शिकी (कपिल लपेटिङ) ओसाका
Furoshiki जापानी कपडा महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू लपेटन को कार्य हो। यो एक सांस्कृतिक गतिविधि देख्न र यसको डिजाइन मा कलात्मक छ। लुगा, भोजन, उपहार र अन्य वस्तुहरू यी सजाया cloths मा र्याप छन्। लपेटन लागि प्रयोग कपडा furoshiki रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
यो सांस्कृतिक गतिविधि sento वा जापानी सार्वजनिक रूपमा टाढा फिर्ता आठौं शताब्दीमा रूपमा स्नान गर्न सम्बन्धहरु छ। को स्नान भ्रमण गर्ने पुरुष र महिला अलग बन्डलहरूको आफ्नो लुगा र्याप थियो। यी सजावटी wrappings सामान समान सजाया cloths प्रयोग र प्रविधी बांधन र्याप थिए बजारमा देखा पर्न थाले। यी cloths कपास र सनी को बाहिर गरियो। यो फरक कपडे र डिजाइन, साथै थप जटिल बांधन प्रविधी मा विकसित। आधुनिक समयमा मा, furoshiki cloths पनि रेशम, नायलन र अन्य सामाग्री बनाउनुभयो पाउन सकिन्छ। आकार को दायरा मा आउन यी cloths विशिष्ट वस्तुहरू र्याप गर्न।
Furoshiki शब्द संग्रह:
Otsukai tsutsumi: को furoshiki शैलीमा मूल ढुवानी र्याप।
Shibori: रेशम वा सन कपडा मा रंगाई को परम्परागत शैली furoshiki cloths बनाउन।
Furoshiki लपेटन तपाईं घरमा के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो:
1 तपाईंले प्रयोग गर्न चाहनुहुने कपडा भेला हुन्छन्। तपाईं एक जापानी furoshiki कपडा छैन भने एक कपास रुमाल वा रूमाल ठीक छ, तर तपाईं यो एक वर्ग वा आयत को आकार मा छ सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यो वर्ग बडा, यो सजिलो तह हुनेछ। तपाईं एशियाली सुपरमार्केट मा सजाया furoshiki कपडा पाउन सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं अक्सर परम्परागत furoshiki cloths फेला पार्न र यस्ता shibori रंगे cloths रूपमा अनलाइन डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ।
2. तपाईंले कवर गर्न चाहनुहुन्छ बक्समा भेला हुन्छन्। यो आकारमा आयताकार हुनुपर्छ र आकार तपाईंले प्रयोग गर्न चाहेको कपडा को एक चौथाई वरिपरि हुनुपर्छ।
3. निर्देशन गर्ने furoshiki लपेटन डिजाइन भनेर गुना गर्न चाहनुहुन्छ लागि तयार छ। म यस्तो http://furoshiki.com/technique_basic_wrap रूपमा अनलाइन उदाहरण जाँच थियो। यी कदम पनि otsukai tsutsumi ज्ञात आधारभूत furoshiki र्याप कसरी गुना रूपरेखा जाँदैछन्।
4 माथिको सामना गर्ने कपडा को underside सुरु गर्नुहोस्। केन्द्र मा आफ्नो बक्स राख्न। त्यहाँ दुई तेर्सो कुना र दुई ठाडो कुनामा छन् भनेर याद गर्नुहोस्।
5 लिनुहुन्छ को ठाडो कुनामा एक र बक्स भित्र यो र्याप।
6 शीर्ष अन्तिम ठाडो कुना र्याप र बक्स वरिपरि यो र्याप। त्यहाँ कुनै पनि अतिरिक्त कपडा हो भने, यो भन्दा बढी तल जस्तै गुना।
7 एक टाई रूपमा तेर्सो कुनामा प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको furoshiki लपेटन अब समाप्त भएको छ!
Furoshiki बारेमा मजा तथ्य:
1 त्यहाँ वस्तुहरूको दायरा लागि धेरै furoshiki लपेटन शैलीहरू छन्। कठिन प्रविधी केही शैलीहरू एक झोला ढुवानी शैली, बोतल लपेटन शैली, फूल लपेटन शैली र बक्से विभिन्न आकार लागि विभिन्न शैलीहरू समावेश गर्नुहोस्।
Furoshiki को2आधुनिक प्रयोगका किनमेल पूरा वा वस्त्र सामान दुपट्टा, बेल्ट वा bandanas जस्तै रूपमा उपहार, बैग लपेटन समावेश गरिएका छन्। धेरै आफ्नो पर्यावरण-मैत्री र minimalist जीवन शैली को एक भाग रूपमा furoshiki प्रयोग गरेका छन्। यो कारणहरू कागज लपेटन को राशि बचत, साथै एक किनमेल यात्रा मा खरिद वस्तुहरूको संख्या सीमित समावेश गर्नुहोस्।
3. furoshiki को लोकप्रियता मानिसहरू furoshiki शैलीमा reusable लैजाने बैग व्यक्तिगत कपडा प्रयोग गर्दै रूपमा हालै पुगेको छ। पर्यावरण को जापानी मन्त्री, श्रीमती Koike, 2006मा पसलहरुमा प्लास्टिक किनमेल बैग को प्रयोग minimalise गर्न furoshiki cloths प्रयोग समर्थन
4 श्रीमती Koikeपनि पर्यावरण को मन्त्री रूपमा उनको समयमा furoshiki उद्देश्यका लागि कपडा एक नयाँ प्रकारको समर्थन। यो कपडा पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक बोतल बनाउनुभयो र परम्परागत जापानी चित्रहरु शैली मा डिजाइन गरिएको थियो। Mottainai furoshiki नाम यस कपडा, ‘लज्जास्पद बर्बाद कपडा’ यसलाई रद्दीटोकरीमा साफ गर्न कसरी र सक्छ सुन्दर कुरा मा गरे प्रदर्शन गर्न चाहनुभएको छ रूपमा गर्न अनुवाद।
5 कवर र खाजा बक्स पूरा गर्न एक तरिका रूपमा आधुनिक जापानी संस्कृति मा furoshiki को लोकप्रियता idealized गरिएको छ। धेरै जापानी लंच बेन्टो बक्से मा छन्, र यी कन्टेनर मा खाना आफ्नो जटिल र सावधान प्रस्तुति लागि जानिन्छ। एक बेन्टो भोजन तयार गर्दा कवर अन्तिम व्यक्तिगत स्पर्श रूपमा देखिन्छ। खाजा खाने बक्स wraps कि furoshiki कपडा खाजा खाने को रंग र शैली मेल गर्न चाहनुभएको छ।
6 अर्को जापानी अनुकूलन furoshiki प्रयोग उपहार को दिने समावेश छ। एक furoshiki कपडा एक ध्यानपूर्वक चुनिएको उपहार र्याप गर्नुपर्छ। उपहार दिने एक सामाजिक अवसर र दायित्व रूपमा देखेको छ जो जापान, एक लामो परम्परा छ। विशेष व्यापार व्यवस्था उपहार को विनिमय बिना ठाउँ लिन हुँदैन। उपहार प्रस्तुति उपहार नै संलग्न भएको furoshiki लपेटन को यसैले महत्व भन्दा पनि अधिक महत्वपूर्ण छ।
7 गर्नुभएको shibori वा furoshiki कपडा (माथि उल्लेख) रंगाई को परम्परागत शैली फिर्ता आठौं शताब्दीमा गर्न तिथिहरु। सम्राट Shomu नै समय वरिपरि नारा मा Todai-Ji मन्दिर एउटा भेटी रूपमा shibori प्रविधी मा रंगे कपडा दिए। को कपडा केही ढाँचाको बनाउन तरिकामा मुड रूपमा shibori कपडा बनाउन प्रविधी, टाई-रंग मिल्दोजुल्दो छ। प्रयोग रंग को परम्परागत रंग बैजनी छ।
8 छैन ठ्याक्कै furoshiki बेला, जापान अर्को सांस्कृतिक तह शिल्प ओरिगेमी भनिन्छ। समान तह प्रविधी आकारहरू दायरा मा कागज गुना प्रयोग गरिन्छ। केही ओरिगेमी डिजाइन जनावर, फूल वा मान्छे समावेश गर्नुहोस्।
9 जापानी लपेटन प्रविधी जुत्ता एउटा नयाँ प्रकारको Vibram निर्माताहरु द्वारा ‘Furoshiki’ भनिन्छ बनाउन प्रयोग भएको छ। जूता को खुट्टा वरिपरि wraps र velcro स्ट्रिप्स साथ सँगै राखिन्छ। आफ्नो furoshiki जूता अन्य जूता भन्दा बढी लचिलो हुन भने छन्। त्यहाँ आउटडोर शैलीहरू, साथै जाडो र बुट डिजाइन हो।
10 राम्रो अनलाइन तपाईं आफ्नो furoshiki यात्रा जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने स्रोत http://furoshiki.com/techniques/ मा पाइन्छ। यो अनलाइन निर्देशन को एक श्रृंखला तपाईं furoshiki शैलीमा cloths र्याप गर्न आवश्यक प्रविधी र शैलीहरू मद्दत छ। साथै तपाईंलाई सहयोग गर्न केही YouTube भिडियो पनि छन्।
edoजापानीकिमोनोचायम्याकोयामाइकफरुरशिकीयुटाटाजापानी संस्कृतिप्राचीन संस्कारप्राचीनजापानकपडाकपडा राप्तीफरुरशिकी ओसाकाजापानीफ्रोशिकीजापानीसेनेटाजापानसेटेक्चरजापानी ट्राफिकेशनMaikoya ओसाकासामुराईलपेट्ने